Alpaca (Vicugna pacos) waa nooc ka mid ah geela Maraykanka ah oo la mid ah, oo la mid ah, oo badanaa ku wareeray llama. Si kastaba ha noqotee, alpacas badanaa waa ay ka yaryihiin llamas. Labada xayawaanku way isku dhow yihiin, waxayna ku guulaysan karaan iskutallaabta. Alpacas iyo Llamas waxay sidoo kale si dhow ula xiriiraan Vicuña, taas oo la aaminsan yahay inay tahay awoowaha duurjoogta ah, iyo Guanaco. Waxaa jira labo nooc oo Alpaca ah: Suri alpaca (es) iyo alpaka Huacaya. Alpacas waxaa lagu hayaa xayawaan kor u dhaafaya heerarka heerarka sare ee Andes ee Koonfurta Peru, Galbeedka Galbiya, Ecuador, iyo Waqooyiga Chile oo dhererkiisu yahay 3,500 m (11,500 ft) ilaa 5,000 m (16,000 ft) oo ka sarraysa heerka badda, sannadka oo dhan .  Alpacas way ka yaryihiin llamas, oo aan ka aheyn llamas, iyaga oo aan loo adeegsanin xayawaan shaqeynaya, laakiin waxaa si gaar ah loogu qurxiyay fiilooyinkooda. Fiber Alpaca waxaa loo isticmaalaa sameynta alaabada la isku duubo iyo kuwa la isku qurxiyo, oo la mid ah dhogorta. Waxyaabahaan waxaa ka mid ah bustayaal, dhididka, koofiyadaha, gacmo-gashi, khafiifiya, noocyo kala duwan oo tufaax ah iyo bullaacado ku yaalla Koonfurta Ameerika, iyo dhididka, sharaabaadyada, joodariga iyo gogosha meelaha kale ee aduunka. Fiber wuxuu ku yimaadaa in ka badan 52 midab oo dabiiciga ah sida ku sugan Peru, 12 sida lagu cayimay Australia iyo 16 sida lagu qeexay Maraykanka. Alpacas waxay la xiriiraan luqada jirka. Kuwa ugu caansan waa candhuuf marka ay ku jiraan calool-xumo, cabsi leh, ama macnaheedu yahay inay muujiyaan xukunka.  Alpacas malaha way ka sii daran yihiin dheddigga, waxayna u muuqdaan inay aasaasaan koox awood leh. Xaaladaha qaarkood, ragga alfa waxay madaxdooda iyo qoorta wiilka oo daciif ah ama qallafsan u dhaqaajin doona si ay u muujiyaan awoodooda iyo awoodooda.
Warshadaha nijiga ah, "alpaca" waxay inta badan sheegaysaa timaha Peruvian Alpacas, laakiin si ka ballaaran waxa ay loola jeedaa qaab lagu xiro dhar alpaca ah, sida midabka, lafaha Icelandic ama xitaa tayo sare leh. Ganacsiga, kala saaridda waxaa lagu sameeyey alpacas iyo noocyo badan oo ah qaababka iyo dhegeysiga. Alpaakada qaangaarka ah waxay guud ahaan u dhexeysaa 81-99 sentimitir (32-39 in) dhererka garbaha. Waxay inta badan miisaankoodu yahay 48-84 kiiloogar (106-185 lb)
Alpacas waxaa la degay kumanaan sanadood. Dadka Moche ee waqooyiga Peru ayaa inta badan isticmaala sawirrada alpaca ee farshaxankooda.  Ma jiraan wax alfacas ah, midka ugu dhow ee nool, vicuña (sidoo kale hooyo Koonfurta Ameerika), waxaa la aaminsan yahay inuu yahay awoowaha duurjoogta ah ee alpaca. Alpacas iyo llamas wey ku guulaysan karaan iskutalaabidda.
Qoyska reer Camelida ayaa markii ugu horreysay u muuqday Ameerika 40-45 milyan oo sano ka hor intii lagu jiray xilligii Eocene oo ka soo farcamay aabihii caadiga ahaa, Protylopus  30 milyan oo sano ka dib dadka degganaa qabiilooyinka Camelini iyo Lamini, waxay u kala baxaan qaabab kala guur ah oo kala duwan Asia iyo Koonfurta Aasiya. Inkastoo geela uu kudhacay Waqooyiga Ameerikaan ku dhawaad ​​3 milyan oo sano ka hor, koonfurta ku soo barbaaray qabaa'ilka aan maanta aragno.  Waxay ahayd ilaa 2-5 malyan sanno ka hor, inta lagu guda jiro Pliocene in Hemiauchenia caan ka ah qabiilka Lamini ay u kala qaybsamaan Palaeolama iyo Lama, kadibna wuxuu mar labaad u noqon lahaa Lama iyo Vicugna markii uu u soo guuray Koonfurta Ameerika.
Wicitaanada Vicuña iyo Guanaco ayaa laga helay Peru ilaa 12,000 oo sano. Meelaha la dagan yahay, llama iyo alpacas ayaa laga helay mummified dooxada Moquegua ee koonfurta ee Peru oo dib u soo celisa 900 ilaa 1000 sano. Mummiyooyinka laga helo gobolkaan waxay muujinayaan laba nooc oo alpacas ah. Falanqaynta saxda ah ee lafaha iyo ilkaha ee mummooyinkani waxay muujiyeen in alpacas ay ka soo degeen Vicugna vicugna. Cilmi-baarisyo kale, oo tixgelinaya sifooyinka habdhaqanka iyo muraayadda ee alpacas iyo kuwa duurjoogta ah, waxay u muuqataa inay muujinayso in alpacas laga yaabo in ay asal ahaan ka soo jeedaan Lama guanicoe iyo sidoo kale Vicugna vicugna, ama xitaa geedka labadaba.
.Alpacas waa xoolo daaqsin ah oo ku nool kooxo qoys oo ka kooban maleer, xagjiriin iyo dhallinyaro. Alpacas waxay uga digaysaa digaagga ku hareereeya dadka soo galootiga adigoo samaynaya fiiq, qeylo-buuq badan oo u eg sida booga sare. Xayawaanka ayaa laga yaabaa in ay weerarto gawaarida yaryar oo leh cagahooda hore, waxayna ku tuman karaan oo ay garaaci karaan. Dagaalkoodu wuxuu u dhexeeyaa xubnaha qooyska (sanduuqyada, dawacooyinka, eeyaha iwm.) Ayaa laga faa'iidaystaa marka alpacas loo isticmaalo sida ilaaliyayaasha ilaalinta ilaalinta idaha.  Alpacas mararka qaarkood waxay noqon kartaa dagaal, laakiin waxay sidoo kale noqon karaan kuwo aad u macquul ah, caqli badan, oo aad u ilaaliya. Inta badan, Alpacas aad ayay u xasilantay laakiin ragga Alpacas ayaa aad ugu dadaalaya marka ay ka qeyb qaataan la dagaalanka alpacas kale.  Marka ay wax u tarayaan, way feejignaadaan laakiin waxay sidoo kale dareemaan markay dareemaan nooc kasta oo khatar ah. Waxay dareemi karaan hanjabaad marka qof ama alpaca kale ka soo baxa iyaga ka danbeeya.  [ilaha ugu wanaagsan]
Alpacas waxay xuduudooda u dhigeen "meelo shakhsi ah" dhexdooda qoysaskooda iyo kooxahooda.  Waxay sameeyaan heer sarre ah oo macquul ah, iyo alpaca kasta waxay ka warqabtaa xayawaanka xoolaha ee koox kasta.  Luqadda jirku waa fure u ah isgaadhsiintooda. Waxay ka caawisaa inay ilaaliso amarkooda. Hal tusaale oo ka mid ah isgaadhsiintooda jirka waxaa ka mid ah musqusha oo loo yaqaano ballaar ballaaran oo dhagahooda la soo celiyo oo ay ka soo jeedaan dhinacyada loo isticmaalo marka alpacas ay difaacaan dhulkooda.  Marka ay da 'yar yihiin, waxay u muuqdaan inay raacaan walxo waaweyn iyo inay kudhowaan ama ku jiraan agagaaraha waaweyn, tusaale ahaan ilmaha alpaca hooyadiis. Tani waxay sidoo kale dalban kartaa marka alpaca ay dhaafto alpaka kale oo ka sii weyn. 
Dumarka waxaa loo yaqaan 'ovulators';  ficil-celinta iyo joogitaanka shahwadu waxay keenaysaa in qoyaan. Dumarka badanaa waxay uuraystaan ​​kaddib marka ay keli ka mid noqdaan, laakiin mararka qaarkood dhib ma heystaan. Bacdamaan dabiiciga ahi waa mid farsamo ahaan adag, qaali ah oo aan caadi ahayn, laakiin waa la dhammeeyaa. Wareejinta Embryo waa mid aad u ballaaran. Ragga ayaa caadiyan diyaar u ah inay u duceeyaan markii ugu horeysay ee u dhexeeya laba ilaa seddex sano jir. Laguma talin karo in gabadh dhallinyaro ah la xannibo illaa ay ka weynaato, waxayna gaadhay saddex meelood laba meel miisaankeedaba. Dumar badan oo haween dhalinyaro ah ka hor intaan maleynin waxay suurtogal u tahay sababaha caadiga ah ee infekshannada uterineinka. Maadaama da'da koriimadu ay si aad ah u kala duwan tahay inta u dhexeysa shakhsiyaadka, waxaa badanaa lagu taliyaa in dadka jilicsan ay sugaan illaa ay dhedigoodu yihiin 18 bilood ama ka weyn inta aan la bilaabin taranka.
Alpacas waxay ku tarmi kartaa wakhti kasta, hase yeeshee way adagtahay in la jaro jiilaalka. Badankooda inta lagu jiro xilliga dayrta ama guga dabayaaqada  [ilaha ugu wanaagsan ee loo baahan yahay] Habka ugu caansan ee lagu heli karo saaxiibka Alpacas waa qalinka wax lagu qoro. Isku duubka jilicsan waa marka ay u guuraan labada haween ah iyo ragga doonaya qalin. Siyaabo kale ayaa loo isticmaalaa dharka madoow halkaas oo hal labeen alpaca loo ogol yahay in ay ku dabacdo qashinka oo leh dhowr haween oo haween ah.  [ilaha ugu wanaagsan] Muddada uurku waa, celcelis ahaan, 11.5 bilood, iyo badanaaba waxay dhalinaysaa hal caruur, ama ciriiri. Mataanuhu waa dhif iyo naadir, markay dhacaan hal mar halkii 1000 dhalmo.  Cria waxay guud ahaan u dhaxeysaa 15 iyo 19 rodol, waxayna joogaan 30 illaa 90 daqiiqo dhalashada kadib.  Ka dib markii ay haweeney dhaleyso, waxay guud ahaan soo dhaweyneysaa mar labaad kaddib markii laba toddobaad ah. Crias waxaa laga yaabaa in laga dhigo dhexgalka dadka oo dhan ilaa lix bilood iyo 60 rodol, laakiin dad badan ayaa doorbidaya in haweenku ay go'aan ka gaaraan goorta ay carmayaan farcankiisa; waa laga wareegi karaa goor hore ama wakhti kuxiran iyadoo ku xiran baaxadda iyo qaangaarka dareenka. Isku celceliska nolosha ee Alpaca waa inta u dhaxaysa 15-20 sano, iyo ugu dheer-
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Alpaca&oldid=190552"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Febraayo 2019, marka ee eheed 09:52.